Fihavanana sa Fahamarinana: safidy sarotra ho an’ny Malagasy! | Gasy ImpACT
Safidy faharoa: “Tsy manan-jo ny hanery ahy hadainga ny namako ka hiteny ny marina aho, na inona na inona ny fiatraikany eo amin’ny fifandraisanay sy ny tohin’ny fiainany.”
Anao ny safidy!
Firy ny Malagasy sahy mijoro nohon’ ny Fahamarinana na dia mety hanimba Fihavanana aza?
Raha ny firenena hafa no jerena, araka ny valin’ny fandinihana natao voalaza tetsy ambony dia 9% ny Anglisy no vonona hadainga ka hiaro ny namany fa ny 91% kosa dia hiteny ny zava-nisy marina na dia hisy fiatrakany amin’ny namany akaiky azy izany. Ny any Venezuela kosa dia 68% no vonona hiaro ny namany ka hadainga eo anatrehan’ny fitsarana fa 32% no vonona hilaza ny marina. Sombiny amin’ny valiny ihany no omena antsika eto fa efa ahitana taratra sahady ny faha-samihafana eo amin’ny firenena isan-karazany anefa izany.
Raha ny filazan’ny mpandinika dia misy ny fiaraha-monina (particulariste) izay milaza hoe: “Ahoana moa no ahafahako mahatoky olona izay tsy “miaro” ny namany akaiky akory aza?” ao kosa ny fiaraha-monina (universaliste) izay milaza hoe “Amin’ny fomba ahoana no hahatokisana olona izay manao tsinotsinona ny lalàna sy ny Fahamarinana ka miaro mpamono olona – eny fa na dia hoe namany aza?”
Asa ianao manokana, fa raha ny fijery antsika Malagasy amin’ny ankapobeny dia toa ao anatin’ilay sokajy voalohany isika. Aleotsika very “zavatra hafa” toa izay hanimba Fihavanana.
Raha ny fahantrana sy fahasahiranana misy eto Madagasikara anefa no jerena, tsy tokony hanova famindra sy fandresen-dahatra ve isika mba hiaina amin’ny fiaraha-monina hanjakan’ny fangaraharana sy Fahamarinana marina.
Misy foana ny tsy maty manota, tsy fantatra loatra ny tena marina amin’ny karazan-draharaha isan-karazany noho ny fitadiavana ny fomba rehetra hanakonana ny marina. Misy sehatra maro izay mitaky ny Fahamarinana mba hanjaka kanefa tsy tanteraka izany noho ny Fihavanana.
Toa ny lafy ratsiny amin’ny Fihavanana no lasa manimba ny sehatra betsaka eto amintsika ka mahatonga ny firenentsika marefo amin’ny fampandrosoana amin’ny lafiny rehetra. Na isika rehetra aza ohatrany malemy sy tsy te hiteny be loatra manoloana an’ireny toe-javatra ireny satria “tsy te hanimba Fihavanana” – “tsy te ho ratsy” amin’ny hafa – “tsy te hianan-kendry” – tsy te hivoaka “seul” hoy ny fitenenana.
Mety misy fiovana ve azotsika hantenaina ao anatin’ny fiaraha-monina sahala amin’izany? Misy olona ve mety sahy hijoro nohon’ ny Fahamarinana ka hanao sy hilaza ny tokony ho izy ka tsy hatahotra ny mety ho fijerin’ny hafa? Firy amintsika no sahy mijoro nohon’ny amin’ny Fahamarinana na dia mety “hifandona” amin’ny hafa aza: eo anivon’ny fianankaviana, fiaraha-monina sy ny firenena? Hatraiza no fetran’ny Fihavanana?
Cette entrée a été publiée le dimanche 3 juin 2012 à 9:14 et taguée "Gasy impact", Blog Gasy, Fahamarinana, Fahatahorana, Fangaraharana, Fianakaviana, fiaraha-monina malagasy, Fihavanana, firaisankina, Fitsarana, kolontsaina Malagasy, Malagasy mivoatra, Tanindrazana, Toe-tsaina sy fomba Malagasy, Tondromolotra, Trompenaars & Hampden-Turner et publié dans Lahatsoratra Malagasy, Politique, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Culte de la Personnalité ou Hypnotisme Collectif: Les Malgaches sont-ils S.M.A.R.T?
Madagascar – Etat fantoche? Vive l’indépendance et après…? »
2 responses to “Fihavanana sa Fahamarinana: safidy sarotra ho an’ny Malagasy!”
[…] Malagasy tanteraka ny Fihavanana izay hita amin’ny endriny samihafa eo amin’ny fiainantsika andavanandro. Ny fitsinjovana ny […]
[…] Mangetaheta fahamarinana sy fiaraha-monina mirindra ny Malagasy kanefa dia hiaraha-mahalala ny voka-dratsy hateraky ny […]